एनआरएनको चुनाव छोडेर काठमाडौंमा खाना बाँड्दै सुरेश «
एनआरएनको चुनाव छोडेर काठमाडौंमा खाना बाँड्दै सुरेश
Published : 28 May, 2021 7:00 pm
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरिकाको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) को चुनाव यही यही मे २९ र ३० मा हुँदैछ । यसका लागि उम्मेदवारहरू प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् ।
तर, एनसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा उम्मेदवारी दिएका सुरेश वाग्ले भने नेपालमै कोरोनाले समस्यामा परेका नेपालीहरूको सहयोगार्थ खटिएका छन् ।
सर्लाहीका वाग्ले अमेरिकाको बोस्टनमा बस्दै आएका छन् । उनी गीतसंगीतको क्षेत्रमा सक्रिय सर्जक पनि हुन् । एनसीसी बोर्ड आफ डाइरेक्टरका उम्मेदवार वाग्लेलाई चुनावको चटारोले छोएको छैन ।
बरु निषेधाज्ञाले समस्यामा परेका मजदुरहरूलाई खाना, बिरामीहरूलाई अक्सिजनसहितका औषधि उपलब्ध गराउनमा व्यस्त छन् वाग्ले ।
उनी भन्छन्, ‘अमेरिकामा साथीहरू प्रचारप्रसारमा हुनुहुन्छ, चुनाव जित्न खर्च गर्दै हुनुहुन्छ । मलाई लाग्छ, चुनाव जितेर पनि समाजसेवा गर्ने हो । र, मैले यहाँ जे गरिरहेको छु, त्यो पनि समाजसेवा नै हो । मेरो देश कोरोनाले आक्रान्त छ । यस्तोमा चुनावभन्दा बढ्दा चिन्ता मलाई यहाँका दाजुभाई, दिदीबहिनीहरूको छ ।’
चुनावको प्रचारप्रसार छोडेर नेपालमै बसेर परोपकारका क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा आनन्द महसुस भइरहेको उनी बताउँछन् ।
त्यसो भए चुनावमा किन उठ्नुभएको त ?
उनले भने, ‘म पहिलेदेखि नै सामाजिक काममा चासो राख्ने मान्छे हुँ । एनआरएन समाजिक संस्था नै हो । बाहिर बसेर धेरै खटियो । एकपटक भित्रै बसेर काम गरी हेरौँ भनेर उम्मेदवारी दिएको हुँ ।’
अमेरिकामा चुनावी सरगर्मी बढेका बेला वाग्लेलाई उनका निकटमहरूले गुनासो गरिरहेका छन्, ‘यस्तो बेला तपाईं नेपालमा हुनुहुँदैन थियो ।’ तर, वाग्ले चुनावमा हारजित जे भए पनि नेपालमा बसेर सेवा गर्न पाएकोमा सन्तुष्ट छन् । भन्छन्, ‘प्लेन, चुनाव, होटलमा गर्ने खर्चले त म यहाँ निषेधाज्ञाले समस्यामा परेका मजदूरहरूलाई सहयोग गर्छु ।’
उनले आफू नेपालमै रोकिनुको पछाडिको कारण यसरी प्रष्ट्याए, पाँच दिनअघि म काठमाडौंमा निशुल्क खाना वितरण गर्ने ठाउँमा पुगेका थिएँ । त्यहाँ ससना बच्चाहरू प्लास्टिकको प्लेट थापेर बसिरहेको देखेँ । त्यो देखेर म भक्कानिएँ । मलाई अमेरिकाको चुनावमा जे होला तर अझै केही दिन यहीँ बसेर नेपालीहरूको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।’
तपाईंले अमेरिकाको चुनाव जित्नकै लागि केही समयलाई सामाजिक काम गर्नुभएको हो कि ?
जवाफमा उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो हुँदो हो त म प्रचारबाजीमा लाग्थेँ होला नि ! मैले यहाँ जे गरिरहेको छु, मनभित्रबाट गरिरहेको छु । नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीलाई खुला हृदयले सहयोग गर्न चाहन्छु । मैले चुनाव जितौँ वा हारौँ, म नेपाली समुदायकै लागि खटिने छु ।’
चर्चित गायक शिव परियार र रचना रिमालको स्वर रहेको ‘सुनको चन्द्रमा’ मा बोलको गीतको भिडियो
गायक महेन्द्र राज बराल र गायिका समीक्षा अधिकारीको ‘सानुमाया’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ।